इन्जिनियरिङ छोडेर तरकारी व्यवसायमा
दिनेश गौतम काठमाडौं, ३० भदौ
‘जागिर खाने होइन, सिर्जना गर्ने हो । अनि, सिर्जनात्मक बन्ने हो भने थोरै लगानीमै उद्यमी बन्न सकिन्छ । र, धेरैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ’ भन्ने मान्यतालाई प्रमाणित गरिदिएका छन् अनिल बस्नेतले ।
बस्नेत आईटी इन्जिनियर हुन् । उनीजस्ता धेरै इन्जिनियर देशमा सम्भावना नदेखेर विदेश पलायन भएका छन् । उनीसँगैका अधिकांश साथी रोजगारीका लागि अमेरिका, अस्टे«लियालगायत देश गएका भासिएका छन् । तर, उनी स्वदेशमै सम्भावना नै सम्भावना देख्छन् । परिणामतः उनका पहिला सफलतातर्फ अगाडि बढ्दैछन् । उज्ज्वल भविष्य कल्पिएर दाङबाट काठमाडौं आएका अनिल स्वउद्यमी मात्र बनेका छैनन्, अरुलाई रोजगारसमेत दिएका छन् ।
उनले केही समय आईटी कम्पनीमा काम गरे । जागिर राम्रै थियो । तर सन्तुष्ट थिएनन् । उनीभित्र ‘आफैं केही गरौं भन्ने हुटहुटी’ थियो । त्यसैले उनले सुरु गरे ‘मेट्रो तरकारी’ ।
कसरी सुरु भयो मेट्रो तरकारी ?
अनिललाई प्रत्येक दिन आमाले तरकारी ल्याउन भन्नुहुन्थ्यो । कामको सिलसिलामा कहिले कहाँ कहिले कहाँ पुग्नुपर्ने । तरकारी किन्ने समय नहुने । समयमा तरकारी घरमा पुर्याउन नसक्ने । यो समस्या आफ्नो मात्र हो कि अरुको पनि हो भनेर अनिलले रिसर्च गरे ।
रिसर्चका क्रममा अधिकांशको घरमा यस्तै समस्या देखे । अनि सबैको समस्या समाधान गर्न भान्छामै तरकारी पुर्याउने आइडिया निकाले । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्ताको घरघरमा पुर्याउन सुरु गरे ‘मेट्रो तरकारी’ ।
मेट्रो तरकारी ई–कमर्स कम्पनी हो । अनलाइनको माध्यमबाट उपभोक्ताको घरघरमा तरकारी पुर्याउने कम्पनी हो । ६ वर्षअघि २० हजार लगानी गरेर उनले काम सुरु गरेका हुन् । दुई वर्ष उनले परीक्षण गरे । बजारबाट राम्रै प्रतिक्रिया आइरहेको थियो । तर, सोचेअनुसार विस्तार गर्न सकेका थिएनन् ।
उनलाई प्रश्नको ओइरो लाग्थ्यो ।
तरकारी नै बेच्नु थियो भने किन इन्जिनियरिङ पढेको ? लाखौं खर्च गरेर पढ्नुको सट्टा कालिमाटी गएर तरकारी बेचेको भए हुन्थयो नि भन्ने वचनको झापड उनले खानु पर्थ्यो । तर, उनी आफ्नो सपनामा अडिग रहे । राम्रा नराम्रा सबै कुराको सामना गर्दै उनले आफ्नो पाइला अगाडि बढाए । पछि हटेनन् । सत्य कामको फल एक दिन मिल्छ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए ।
२०१४ मा आइडिया स्टुडियोले आइडिया हन्टको आयोजना गरेको थियो । उनले पनि आफ्नो आइडिया पेश गरे । २ सयभन्दा बढी आइडियाको बीचमा अनिलको आइडिया टप २० मा पर्यो ।
उनको आइडिया टेलिभजनमा प्रस्तुत भयो । धेरैले मन पराए । बैंकले उनलाई ३ लाख लगानी गरिदियो । अनि तरकारी उपभोक्ताको घरमा पुर्याउन भ्यान लिए ।
त्यसपछि मेट्रो तरकारी ब्रान्डिङ भयो । अनलाइनबाट तरकारी अर्डर आउन थाल्यो । उपभोक्ता, होटल, रेष्टुरेन्ट, कलेज, हस्पिटल, पसललगायत क्षेत्रबाट अर्डर आउने क्रम बढेपछि उनले टिम बिस्तार गरे । अहिले उनले ३२ जनालाई रोजगार दिएका छन् ।
ताजा अग्र्यानिक तरकारी दैनिक ३० हजार उपभोक्ताले उपभोग गर्छन् । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी सिधै उनले ल्याउने गरेका छन् । कृषकबाट ल्याएको तरकारीलाई ग्रेड छुट्याएर अर्डरअनुसार डेलिभरी गर्ने गरिएको छ । तरकारीको अर्डर अनलाइन, मोबाइल एप, फोन र सामाजिक सञ्जालबाट आउँछ ।
‘रातभर आएको अर्डर बिहान र बिहान आएको अर्डर साँझमा उपभोक्ताको भान्छामै पुर्याउने गरिएको छ,’ संस्थापक अनिल भन्छन्, ‘उपभोक्ताले मन पराइदिनुभएको छ ।’
मेट्रो तरकारीले नेपालमै उत्पादित तरकारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘नेपालकै कृषिजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादित तरकारी पुग्दैन । माग धेरै उत्पादन कम भएकाले बाहिरबाट तरकारी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
‘नपढेका र कमजोर मात्र कृषिकर्ममा लाग्ने भन्ने सोच छ । यसलाई चिर्न पनि कृषिमा लागेको हुँ,’ अनिल भन्छन्, ‘कृषकलाई दर्जा नै दिइँदैन । जमिन बाँझो राखेर युवा विदेश पलायन हुन्छन् । अब यसलाई राज्यले रोक्नुपर्छ ।’
नेपालमै तरकारी उत्पादन बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘कृषकलाई प्रोत्साहन र राम्रो मूल्य दिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ अनिल भन्छन्, ‘मानिसले होइन, मेसिनले काम गर्ने हो, त्यसैले उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।’
अहिले मेट्रो तरकारीले काठमाडौंं र ललितपुरमा मात्र डेलिभरी गर्ने गरेको छ । अब केही समयपछि उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गर्ने योजना छ । व्यस्त शहरमा सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको अनिलले सुनाए । मेट्रो तरकारीले तरकारीका साथै फलफूल र खाद्यान्न पनि डेलिभरी गर्दै आएको छ ।
यदि तपाईं पनि ब्यस्त हुनुहुन्छ, तरकारी किन्ने समय छैन, गुणस्तरीय अग्र्यानिक तरकारी उपभोग गर्ने हो भने मेट्रो तरकारीलाई सम्झनुहोस्, तपाईंको भान्छामै तरकारी आइपुग्छ ।
जहाँ समस्या, त्यहाँ सजिलो
युवालाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने सारथिः आइडिया स्टुडियो
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३१, २०७६, ०१:२९:००
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : राष्ट्रिय स्वाभिमान उचो बनाउन हदैसम्मको प्रयास गर्छु [पूर्णपाठ]
दिनेश गौतम दिनेश गौतम
किन घट्यो कोरोना परीक्षण ?
विज्ञ भन्छन् : संक्रमण समुदायमा छिर्‍यो, सरकार भन्छ : होइन
दिसामा पनि कोरोना भाइरस तर ढल वा पानीबाट सर्दैन
ढलमा कोरोना भाइरस अनुसन्धान विवाद: अनुमति नलिई अनुसन्धान
‘लाइछु माया अर्कैको नासो’ जस्तै बनेको बीमाको जीवन
प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै